Nagu saabsan - FOSHAN GOODTONE FURNITURE CO., LTD
Foshan Sitzone Furniture Co., Ltd. Laanta Goodtone
Waxaa la asaasay 2014, waa shirkad casri ah oo ku takhasustay kuraasta xafiisyada dhamaadka-sare, midaynta cilmi baarista iyo horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta.Goodtone waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee alaab guri xafiis ee Shiinaha.
30000 ㎡ Aagga Warshada
10 Sano+ Khibrad Wax Soo Saar
5 Sano Dammaanad
Waxaan bixinaa adeegyo xirfad leh.
Wax Soo Saarka Casriga Ah & Farsamada Dhaqanka
Qalab wax soo saar oo heer sare ah oo ay ka shaqeeyaan farsamoyaqaanno xirfad leh iyo kuwa isku duwaya ayaa soo saara kuraasteena sare.Naqshadeynta silsiladda warshadaha oo dhan ayaa si wax ku ool ah u xakamaysay qiimaha cutubka alaabta ceeriin ee alaabta iyo tayada qaybaha dhammaan silsiladaha warshadaha ee alaabta.
Kooxdu waxay leedahay laba shaybaar oo wadarta guud ee qiyaasta maalgashiga ee 5 milyan.Waxaa loo dhisay si waafaqsan heerarka qaranka ee CNAS iyo CMA, waxayna si firfircoon u qabataa shahaadada shaybaadhka madaxa bannaan ee qaranka.In ka badan 100 nooc oo ah noocyada kala duwan ee qalabka tijaabada, oo leh habab tijaabo ah oo horumarsan oo la isku halayn karo, habab imtixaan adag oo cilmiyaysan iyo dabeecado cilmiyaysan oo adag oo culus si loo tijaabiyo dhammaan habka wax soo saarka ee agabka soo socda, caddaynta, nooca, muunad, iwm, si loo hubiyo tayada alaabta.
Sumadda silsiladda sahayda, 7 silsilado wax soo saar toos ah oo kuraas kor iyo hoosba ah, si loo hubiyo waxtarka wax soo saarka ee alaabta.Waxay ka qaybgashay Shiinaha (Guangzhou/Shanghai) Carwada Caalamiga ah ee Furniture 10 sano oo isku xigta, Germany Cologne Exhibition, Dubai International Furniture Fair, Malaysia Furniture Fair, iwm mar kasta oo ay ka qaybgasho bandhigga, waxay noqon kartaa diiradda dareenka macaamiisha guriga iyo dibadda.
Shabakadda Suuqgeynta ayaa Shaacisay Adduunka
Waxay leedahay waaxda ganacsiga ee Kuuriya, xafiis Bariga Dhexe, iyo xafiis Ruush ah.Waxay la shaqaysaa shirkadaha suuq-geynta alaabta guryaha ee heer-caalamka ah waxayna ka go'an tahay inay si fiican u ballaariso kanaalka caalamiga ah.
Saldhigyada adeegga ayaa laga sameeyay dalka oo dhan ee Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Nanjing, Wuhan, Hangzhou, Suzhou, Chengdu, Chongqing, Xi'an, Ningbo, Zhengzhou, Urumqi iyo gobollada kale, oo ay ku sugan yihiin shaqaale iib oo xirfad leh.
KU SAABSAN AALADAHA GOODTONE
Markaad rabto inaad haysato badeecad heersare ah, Goodtone ayaa kuu fiican adiga.Waxaan u qaadanaa naqshadeynta sida fikradda ugu dambeysa.Xidhiidh kastana waxaa wada naqshad.Waxay soo ururisaa naqshadeeyayaasha maxalliga ah ee heer sare ah, waxayna gaadhay iskaashi istiraatijiyadeed oo ay la yeelato naqshadeeyayaasha caalamiga ah ee ugu sarreeya sida Jarmalka iyo Maraykanka.
Kooxda baakadku waxa looga baahan yahay inay ku xidhaan kuraasta xafiiska iyo agabka sanduuqyada baakadka oo ay ku xidhaan cajalad.Sidoo kale wwaxaan leeyahayahbaler si toos ah, si baakadaha si hufan oo waxtar leh u badbaadiyo dhibaatada, soo gaabiyo wareegga wax soo saarka.
Marka alaabta la soo buuxiyo, waxaa lagu dhejiyaa kaydka si looga ilaaliyo qorraxda iyo roobka oo la sugo in lagu shubo weel.
Isla marka aad soo gudbiso dalabkaaga, waxaanu diyaar u nahay inaanu go'aamino taariikhda keenista iyo tafaasiisha shixnad ee khuseeya.Marka la xidhidhinayo, waxaanu diyaarin doonaa shaqaalaha si ay ula socdaan oo sawiro uga qaadaan si aan u hubinno in alaabta lagu shubo weelka si badbaado leh iyo waqtigii loogu talagalay.
Ourdadka wax iibiyayihiinsxirfadle gaar ah!Waxay leeyihiin sanado khibrad iib ah waxayna yaqaaniin dhammaan faahfaahinta alaabta wadnaha, oo had iyo jeerdiyaar u ah inuu siiyo macaamiisheena jawaabo degdeg ah oo hufan.Fadlan xor u noqo inaad nala soo xidhiidhoxirfadle dadka wax iibiya.